I-villa ezimeleyo eSa Tanca, eChia
I-Villa 10 imizuzu yokuhamba ukusuka elunxwemeni ebandakanya igumbi lokulala eliphindwe kabini, igumbi lokuhlambela elineshawa ye-hydromassage, ikhitshi elixhotyiswe, igadi yabucala, iveranda kunye nendawo yokupaka.
I-villa ezimeleyo emalunga ne-40 yeemitha zesikwere ebandakanya ikhitshi enezixhobo, igumbi lokulala eliphindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela elineshawa ye-hydromassage. Indlu ixhotyiswe ngokupheleleyo ngamashiti, iitawuli, izitya, iLCD TV, isixhobo sokomisa iinwele, i-ayina, i-air conditioning, i-wifi yasimahla, i-barbecue, izitulo zedekhi, iambrela kunye neebhayisekile zasimahla.
Indlu ijikelezwe yigadi enkulu kwaye igcinwe kakuhle. Ngaphaya kweveranda egqunyiweyo, enikwe itafile yegadi kunye nezitulo, ingca yesiNgesi iyanwenwa, ihonjiswe ngeentyatyambo eziqhelekileyo kunye nezityalo, iindawo ezinomthunzi kunye nezihlahla zeMeditera.
4.89 ·Izimvo eziyi-121
Umgama omfutshane kude, ngeenyawo, ngemoto okanye ngeebhayisekile onazo, kuya kuba lula ukufikelela kwiindawo ezinomdla wendalo, izinto zakudala okanye umdla wezemidlalo. Iilwandle ezintle ngokupheleleyo, iindawo ezide zesanti okanye ii-cove ezifihliweyo, iisayithi ze-archaeological kunye ne-nuraghe, iindawo zokubonwa kwezilwanyana zasendle, ukuntywila, ukukhwela ihashe kwiindlela zamandulo zaseRoma ngokusebenzisa ijuniper kunye ne-scrub yeMeditera enevumba elimnandi.
Le yeminye yemisebenzi esinokuyicebisa, sisodwa okanye kunye nezikhokelo ezinomdla kunye neengcali.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$907